सामाजिक संजालमा खिसिक्क हासेर भाइरल बनेका ‘शेरे’ यस्तो अवस्थामा भेटीए, आखिर को हुन् यिनी ? – Etajakhabar
मिलन राई, सामाजिक सञ्जालमा अक्सर एउटा हसिलो मान्छे देखिन्छ । मंगोलियन झल्को दिने ती मान्छे अनेक विषयमा प्रयोग भएका हुन्छन्, जसले हेर्छ, पढ्छ, उ पनि दिल खोलेर हास्छ, किनभने ती सामग्रीमा यी मान्छे पनि फुक्काफाल हासिरहेका हुन्छन् ।बोलिचालीको भाषामा प्रायः एउटै शब्द प्रयोग हुन्छः ‘शेरे । ‘शेरे’ हास्यक्षेत्रमा काल्पनिक तर स्थापित पात्र र चरित्र बनेका छन् ।
युवापुस्तमा कसैलाई ‘स्याटर’ मार्नु परे प्रयोग हुने गरेको शब्द हो शेरे । सामाजिक सञ्जालमा शेरेका रुपमा देखिने हसिला पात्र नेपाली नै पो हो कि भनेर हामी झुक्किन्छौँ पनि । किन भने उनी नेपाली मन, मष्तिष्कमा मात्र होइन, मंगोलियन अनुहार भएकाले नेपाली नै हो कि भन्ने सम्झन्छौँ । सोच्छौँः शेरे पनि ‘हमजाएगा’ जस्तै वास्तविक पात्र पो हो कि ! तर वास्तविकता अर्कै छ । चुट्किलाका काल्पनिक शेरे र हसिलो शेरेको वास्तविक जीवनमा तादाम्यता छैन । उसो भए को हो त सामाजिक सञ्जालमा छपक्कै देखिएका र मनमुटुमा बसेका शेरे ?
हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको शेरे पात्र याओ मिङ हुन् । याओ मिङ चीनका बास्केटबल खेलाडी हुन् । याओ चीनको राष्ट्रिय टोलीबाट बास्केटबल खेल्छन् । चीनमा याओलाई अत्यधिक सम्मान छ । याओले चीनमा बास्केटबलका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । यति मात्र होइन, याओ यतिखेर चिनिया बास्केटबलका अध्यक्ष हुन् । सांघाई साक्र्सबाट व्यावसायिक बास्केटबल सुरु गरेर २१ वर्षमै चीनमा एक नम्बरका खेलाडी बने याओ । ७.५ इञ्च उचाइ, १ सय ३६ केजी तौल र बलिष्ट शरीरका धनी याओलाई चानचुन मान्छेले बास्केटबल कोर्टमा रोक्न असम्भव थियो ।
आज विश्वभर हास्यपात्रका रुपमा याओको तस्बिर प्रयोग हुन्छ । नेपालमा पनि काल्पनिक हास्यपात्र शेरेका रुपमा याओको तस्बिर स्थापित छ । नेपालीसँग अनुहार मिल्ने भएकोले काल्पनिक शेरे र तस्विरको शेरे एकै हो कि भन्ने धेरैमा विश्वास पनछ । (एजेन्सीको सहयोगमा) हामीले जनता समाचार बाट
Posted on: Monday, July 22, 2019 Time: 22:07:54